bụ ụlọ ọrụ teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-arụ ọrụ na R&D, mmepụta na ire capsule osisi.
Ihe Anyị Na -eme？
Tọrọ ntọala na 2004, yana ọnọdụ zuru oke nke mpaghara akụ na ụba na teknụzụ teknụzụ nke Yantai Haiyang n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Shandong Peninsula yana n'ụsọ oké osimiri ugwu nke oké osimiri odo, Yantai Oriental Pharmacap Co., Ltd. & D, imepụta na ire capsule osisi.
Na mpaghara nke 60,000 square mita, ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkachamara na mmepụta nke HPMC osisi capsules na HPMC dị ka isi ngwaọrụ. Ugbu a, anyị bụ otu n'ime ndị na -emepụta capsules oghere nwere ikike ikike ọgụgụ isi nọọrọ onwe ya na China ma anyị bụkwa onye ndu na ụlọ ọrụ capsule osisi nke China.
Site na mmepụta kwa afọ nke ijeri okpuru osisi iri, anyị nwere teknụzụ mmepụta ọkachamara maka HPMC, pullulan polysaccharide na capsules osisi nwere mkpuchi. Anyị na -eji ihe ọkụkụ sitere n'okike na teknụzụ na -emepụta capsules oghere, nke meriri patent mba maka ihe mepụtara. Ezubere ụlọ nrụpụta anyị na akụrụngwa mmepụta akpaka dabere na ihe GMP chọrọ ma na-erube isi na njikwa usoro ọkọlọtọ.
Na ụkpụrụ nke "onye ahịa kachasị, ịdị mma nke mbụ”, Anyị na -enye ọha mmadụ ngwaahịa kapịlị kapịlị ma na -agba mbọ ịbụ onye na -enye ike maka capsules osisi na China.
Bụrụ ụlọ ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi maka ụlọ ọrụ ọgwụ na ndị na -azụ ahịa
Ichekwa ụlọ ọrụ ahụike
Uru bara uru
Na -agba mbọ iweta ndị ọrụ obi ụtọ na ịrụsi ọrụ ike site na imepụta ihe ọhụrụ na mmụọ ịsụ ụzọ maka ndị ahịa